VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers' | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
SMPTE Hollywood dia mitrandraka vahaolana virtoaly sy lavitra amin'ny "The Ripple Effect"
ITV Mampiasa Telestream Cloud Services hanomanana ny BritBox UK amin'ny Amazon Prime Channels
Webinar mivantana: Ahoana no hamahan'ny Matrox IP KVM ny fanamby ataon'ny mpiasa nizara anao
Home » Vaovao » VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers'
VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers'
Notarihin'ny mpanara-maso VFX James David Hattin, ny ekipan'ny VFX Legion dia nanolotra fitifirana sarotra ho an'ny 'Half Brothers', sarimihetsika vaovao an'ny talen'ny Luke Greenfield tao amin'ny Focus Features. Orinasa lavitra tanteraka hatramin'ny nanombohany, Legion dia namorona tamim-pahombiazana ny fifangaroan'ny vokatra photorealistic sarotra ho an'ny tantara an-tsary comedic.
Saro-kenatra vitsivitsy fotsiny ny famokarana rehefa nijanona ny fitifirana. Ny fanidiana dia nanakana ny ekipa tsy hivoaka hitifitra ireo takelaka ilaina amin'ny sehatry ny sary mihetsika. VFX Legion namorona nomerika ny singa lehibe ao amin'ilay filaharana, manome vokatra vokarin'ny solosaina mifangaro mifangaro amin'ny sary.
Ity horonantsary ity dia manaraka ny tantaran'ny mpanantanteraka meksikana iray sy amerikanina malala-tsaina izay nahafantatra tamin'ny rainy narary fa mpirahalahy izy ireo. Raha tokony hamaly ny fanontanian'ireo zanany lahy dia nanoritsoritra ilay dia an-dàlana ny patriarika nifindra monina avy tany Mexico nankany Etazonia. Ny làlana dia feno torolàlana izay mampiharihary ny tsiambaratelon'ny lasa miafina an-drainy.
Lahatsary niomerika nampitombo ny sary azo ampiharina sy ny tahiry izay manaraka ny dian'ny rahalahin'izy ireo niampita ny VFX Legion miaraka amina fanamby mahaliana sy mamorona sy ara-teknika mahaliana. Ny mpanakanto dia nanala ireo takelaka famantarana, hazo ary singa hafa izay tsy nifanaraka tamin'ny toerana.
Ny mpanara-maso CG Rommel S. Calderon dia nanao maodely sy nandrafitra ny fifangaroan'ireo takelaka amoron-dàlana novokarin'ny solosaina natsofoka tao amin'ny sary voalohany an'ny New Jersey Turnpike. Ireo singa niomerika dia nanova ny tifitra, namorona endrika làlambe iray mamakivaky an'i South Texas rehefa mianavaratra mankamin'ny arabe amin'ny kalesy Mercedes-Benz taloha ireo rahalahy.
Talohan'izay: sary an-tsary manamorona ny NJ Turnpike
Ilay raim-pianakaviana mpifindra monina dia nanao sarintany tamin'ny lalana nitazomana ireo iray tam-po ho amin'ny ankamantatra iray tamin'ny fambara ny fisehoan-javatra nahatalanjona izay nanova ny fiainam-pianakaviany. Teo am-pitondrana fiara dia hitan'ireo rahalahy ilay trano mitazona ny famantarana farany amin'ny lasa taloha.
Nomena sary misy fomba Espaniola
Aorian'ny: Notifirina nampitomboina tamin'ny modely CG an'ny iraka sy singa niomerika namboarina mba hamoronana fijery avy amin'ny fiara mitondra amin'ny làlambe iray any Texas
iraka, ny ekipan'i Legion dia nanangana maodely CG namerina ny firafitra. Ny artista dia nampifangaro ilay tranobe sy ireo singa CG hafa ao anaty sary voarindra izay mamorona ny fomba fijery araka ny fahitan'ireo rahalahy ny fiara mihetsika.
Zava-dehibe ny nanambadian'ny sary an-tsary nomerika tsy hita maso miaraka amin'ny sary nalaina tamin'ny toerana misy azy. Ny famoahana izany dia mitaky faharanitan-tsaina ara-teknika sy famoronana.
Modely CG 3D no namerina ny endrik'i Mission Spanyol
Ny tontolo iainana dia noforonina ary namboarina manontolo tao amin'ny CG. Calderon dia nanamboatra kopian'ny misiôna amin'ny 3D miaraka amin'ny fampiasana antsipirihany fotorealistic AutodeskMaya's. Mpanakanto mpanara-dia Ruy Delgado dia nampifangaro ny fihetsiky ny fijerin'ny fiara virtoaly rehefa mandeha amin'ny làlambe manitsy ny zoro fakan-tsary izy ary manosika ny tifitra mba hampifangaro ny vokatr'ilay maodely CG 3D sy ny misiona Espaniôla tsy hita maso ao anatin'ny faritra tsirairay.
Talohan'ny nitifirana ny tototry ny NJ Turnpike
"Nandritra izay valo taona lasa izay, ny sanganasan'i Legion tamin'ny horonantsary sy andian-tsarimihetsika - vanim-potoana isaky ny vanim-potoana - dia nanome laza anay amin'ny maha orinasa manolotra tsy tapaka ny sary voadona be dia be momba ny sary hita be pitsiny sy avo lenta amin'ny fe-potoana fatratra," hoy i Hattin. "'Half Brothers' dia nanome anay fotoana hiara-hiasa amin'ny ekipa mahatalanjona amin'ilay horonantsary ary hampihatra ny halehiben'ny fahaizan'ilay orinasanay lavitra sy ny fahaizan'ny mpiara-miasa amin'ny mpanakanto WFH sy ny ekipan'ny fitantanana taloha mba hamoronana vokatra mihoatra ny nandrasana.”
Ny maodely 3D an'ny iray amin'ireo takelaka amin'ny làlambe namboarina niomerika mba hamerenana ny endrik'ilay sarimihetsika
Momba ny Legion VFX:
Miorina amin'ny Los Angeles ary British Columbia, Legion dia natomboka tamin'ny taona 2013 ho orinasa lavitra tanteraka. Mpanorina, veteranin'ny indostrialy James David Hattin, ilay mpanao mari-pahaizana lavitra miaraka amin'ny lohan'ny Legion, dia namorona ny orinasa hanome tombony ireo tolotra effets visuels izay manararaotra ny fahafahan'ny fifandraisana nomerika. (WFH Reel)
Ny vondrona mpiorina 250+ WFH zokiolona tsy mitsaha-mitombo, nalaina avy amin'ny talenta manerantany miavaka momba ny fahitana vokany nandritra ny taona maro, dia miara-miasa amin'ny singa tokana ao anatin'ny tontolon'ny asa virtoaly tokana. Legion dia namorona effets visuels ho an'ny lisitr'ireo sarimihetsika misy endri-javatra sy andian-tantara an-jatony maro amin'ny andian-tsarimihetsika avo lenta miaraka amina ekipa lavitra tanteraka mandritra ny folo taona. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny VFX Legion sy ny serivisy: , [email voaaro], 818.736.5855.
Lohateny: 'Half Brothers'
Orinasa mpamokatra - Fitaovana ifantohana
Notarihin'i - Luke Greenfield
Tantara nataon'i - Ali LeRoi, Eduardo Cisneros
Sarimihetsika nataon'i - Jason Shuman, Eduardo Cisneros
Sinema nataon'i - Thomas Scott Stanton
Fanontana horonantsary nataon'i - Joe Mitacek
Vokatry ny fahitana avy amin'i - VFX Legion LA / BC
James David Hattin - mpanara-maso ny vokatra azo
Nate Smalley - mpamokatra vokar-maso
Dylan Yastremski - mpitantana ny tetikasa effets visuels
Reid Burns - mpamokatra executive effects
Rommel S. Calderon - mpanara-maso cg
Matthew Noren - mpandrindra ny vokatra azo
Eugen Olsen - mpamorona nomerika
Ruy Delgado - mpanakanto mpanara-maso
Nick Guth - mpamorona dizitaly
Lahatsoratra farany an'i SJ Golden (jereo rehetra)
VFX Legion dia mamorona effets ho an'ny 'Half Brothers' - Aprily 5, 2021
Burrell Taps Ny ekipan'ny Colonie hanangana ny fantsona vaovao an'i Xfinity, 'Black Experience' - Aprily 1, 2021
Ny VFX Legion dia manampy an'i 'Nocturne' hamely ny fanamarihana tsara amin'ny FX ho an'ny mpikomy amin'ny Blumhouse. - Febroary 23, 2021
Modely CG compositing ampy VFX 2021-04-05
Previous: Ny “Post Break” nataon'i PNYA dia lasa ambadiky ny seho an-tsehatra miaraka amin'ny Pro Pros avy amin'ireo mpifaninana loka
Next: Ilay cinematographer nahazo loka loka Josh Ausley dia niherika ny taonan'ny famokarana nandritra ny areti-mandringana